बाघ दिवस कार्यक्रम
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीतिक व्यापारीको सीप देश विकासमा लगाउन लागि आफ्नो धारणा अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ…
उखान अंकल लड्नु भो ! बालुवाटारको बालुवामै चिप्लेर लड्नु भो ! हल्लखल्ल भो ! सबै भेला भए ! एउटाले हत्तपत्त तुलसीमठ छेउ पुर्यायो ! अर्को पानीको लोटा मुखमा जोड्न पुग्यो ! कोहि…
विपीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा नै अवलम्बन गरौं
नेपालमा मात्र नभई सारा विश्वमा नै उच्च छवि बनाएका एक महान् राजनीतिज्ञ हुन् विपी कोइराला । नेपाली कांग्रेस पार्टीका संस्थापक नेता विपी कोइराला आफ्नो जीवनभर प्रजातन्त्रका लागि लडिरहे । विपीको आर्दश, विचार…
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड
कानूनी सिद्धान्त, कानून—न्याय र कार्यविधिको बारेमा सक्षम न्यायाधीशले फैसला गर्दा न्यायप्रतिको इमान्दारिता कायम गर्न सक्नै पर्दछ। कानूनको सिद्धान्त, कानून, न्यायका मूल्य मान्यता, कार्यविधिको ज्ञान नभएको न्यायाधीशको फैसलाले न्याय दिन सक्दैन। कार्यक्षमता अभाव…
समतामूलक समाजको बाटो
सामाजिक समावेशीकरण: नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो।विविधता भित्र रहेका सकारात्मक पक्षलाई समेट्दै विद्यमान विभेद अन्त्यको लागि नेपालको संविधानले समानुपfतिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण…
जितु गौतम ! अचेल त दर्जी पनि लेख्न थाल्नु भएको छ क्यारे ! हैन त ? ०५२/५३ तिरको तपाईं सगै जोडिएको एउटा रोचक प्रसंग स्मरणम गराउँछु है त ! तपाईं लाई सम्झना…
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक ईजलाशले ख्याल नगरेको विषय
पृष्ठभुमि: प्रधानमन्त्री केपि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८।३।८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसका विरुद्द ३० वटा रिट निवेदनहरु परे । २९ वटा रिटहरु कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गरे भने एउटा रिट शेर बहादुर…
जातीय समस्याको समाधान
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय मुलुक हो । भौगोलिक विबिधता र जैविक बिविधता पनि अन्य मुलुकको दांजोमा यहां कम छैन । जहां विबिधता हुन्छ त्यहां प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविकनै हो । विबिधतालाई एउटै सुत्रमा…
सकारात्मक सोचः महामारीसगं जुध्ने आधार
जव मानिस पुर्ण रुपमा सुसुचित हुन्छ तवमात्र उसले आफुलाई विश्वास गर्न सक्दछ र सबै प्रकारका अफवाह र होहल्लाहरुलाइ तिरस्कार गरेर सहि निर्णय लिन सक्दछ, त्यसकारण मानिसले आफुले आफुलाई विश्वास गर्नु नै सबैभन्दा…